Tantaran'i Jack Grealish Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Tantaran'i Jack Grealish Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Jack". Ny tantara Jack Grealish Childhood Story miampy Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Jack Grealish Tantaran'ny fahazazana zazakely- Ny fandalinana hatramin'ny daty. Credits mankany amin'ny IG, Twitter, TheTimes ary Vice.
Ny famakafakana dia misy ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany voalohany, ny lalan'ny tantara malaza, mitombo ny laza laza, ny fifandraisan'ny tena, ny fiainanao manokana, ny fiainam-pianakaviana, ny fomba fiaina sns
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany mihazakazaka ary mifoka ny mpiaro ny lasa. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Jack Grealish izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Vao nanomboka, i Jack Peter Grealish dia teraka tamin'ny andro faha-10 ny volana septambra 1995 tamin'ny reniny Karen Grealish ary rainy an'i Gre Grealish tao an-tanànan'i Birmingham, United Kingdom. Ity ambany ity ny sary mahafinaritra an'ny ray aman-drenin'i Jack Grealish izay mijery any amin'ny 40 tara farany.
Jack Grealish ray aman-dreny- Karen sy Kevin Grealish
Ilay mpilalao baolina kitra anglisy miaraka amin'ny fianakaviana anglisy sy Irlandy dia teraka voalohany tamin'ny zanany telo tamin'ny zanany sy ny ray aman-dreniny Karen sy Kevin izay Katolika mpivavaka tsara. Teraka zaza sambatra izay nankafy ny tombony rehetra izy.
Na dia teraka tao Birmingham tao amin'ny fianakaviana iray antonony aza i Jack dia notezaina niaraka tamin'ny zanany lahy Kevan Grealish sy rahavaviny - Kiera sy Holly. Nihalehibe tao Solihull, tanàna lehibe any Angletera izy ary fonenan'ny orinasa mpanamboatra fiara misy kodiarana efatra Land Rover.
Jack Grealish toerana fiterahana. Credit any WorldAtlas
Ny fiainana tany Jack tany am-boalohany dia nitombo tamin'ny loza ara-pianakaviana. Nasehon'i Grealish ny fahafatesan'ny anadahiny lahy izay nantsoina hoe Keelan Daniel Grealish. Maty izy rehefa vao efatra taona monja i Jack kely. Little Keelan Daniel sary eto ambany dia nahafatesana COT tamin'ny sivy volana tamin'ny aprily 2000.
I Jack Grealish dia namoy ny zandriny lahy fony izy efa-taona. Ny trosa amin'ny IG
Araka ny nametrahan'i Google azy, ity karazana fahafatesana ity dia fantatra amin'ny hoe deathsyndrome tampoka (SIDS) no teny ampiasaina ilazana ny fahafatesan'ny zazakely tampoka amin'ny torimasony izay tsy ahitàna antony na antony iray.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny nipetraka tao Solihull dia nahita ny fianakavian'i Jack Grealish ankoatry ny ankizy avy amin'ny fianakaviana katolika izay manana ny zanany manatrika ny Our Lady of Compassion Roman Catholic School. Grealish dia nahita fahombiazana tamin'ny fanatanjahantena fony tany am-pianarana, hira izay nahatonga ny fanapahan-keviny hanaraka ny baolina kitra. Niresaka momba ny baolina kitra, ny mpandray anjara rehetra amin'ny fianakavian'i Jack Grealish dia mpankafy Aston Villa.
Jack dia nanana ny mpilalao Aston Villa ankafiziny indrindra dia i Paul Charles Merson, mpilalao baolina kitra teo aloha izay nahita fahombiazana ho mpanafika mpiady sy mpikarakara mpilalao an'ny Aston Villa. I Paul taty aoriana dia lasa mpilalao fototra amin'ny fahitalavitra baolina kitra anglisy miaraka amin'ny SkySports. Ity ambany ity ny sarin'i Jack ao anaty lobaka Aston Villa miaraka amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy sy ilay sampy Paul.
Jack Grealish (ankavia) fony mbola zaza, niaraka tamin'i Sean Mills zanak'olo-mpiray tam-po aminy ary i Paul Merson (afovoany)
Tamin'izany fotoana izany dia samy zatra niandry tany ivelan'ny fiofanana tany Villa avokoa ireo zazalahy roa haka sary miaraka amin'i Paul Merson, ilay sampin-dry zareo izay nanao ny 101 Premier League ho an'ny Villa avy any 1998 ka 2002.
Nandeha tsy nitsidika ny fiofanana tao Villa park i Jack, nanao fanatanjahan-tena tamin'ny baolina kitra mba hanaraka ny dian'i Paul Merson. Milalao baolina kitra eo an-toerana miaraka amin'ny namana dia tsy nahita ny fahaizany fotsiny. manarona ny marika fa manao zavatra ivelan'ny manga miaraka amin'ny baolina fandaka baolina. Ireo no karazan'asa mitovy amin'ny an'ny afovoan-tany nanafika.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fifaliana niainan'ny fianakavian'i Jack Grealish dia tsy misy fetra rehefa nahita ireo fitsapana nandalovan'izy ireo tamin'ny loko manidina ary nahalatsaka fisoratana anarana tao amin'ny trano fianarahan'ny Villa.
Jack Grealish- Fiainana voalohany amin'ny asa amin'ny alàlan'ny Villa Academy. Ny trosa amin'ny IG.
Fiandohan'ny baolina kitra no fanirian'ny ray aman-drenin'i Jack Grealish ho an'ny zanany lahy. Nandritra ny filalaovana ny Akademia Aston Villa, nanohy ny fianarany i Jack araka ny torohevitry ny ray aman-dreniny izay tsy te-hanao baolina kitra fotsiny. Ny fiarahana am-pianarana amin'ny sehatry ny baolina kitra dia nahita an'i Grealish nanao sorona betsaka, noho izany dia mijanona ho mpilalao ekipa tsotra amin'ny mpiara-miasa aminy.
Sary an'ny fianakaviana Jack Grealish
Jack dia nahazo ny amboarany voalohany tamin'ny taona 7. Fantatrao ve?… Ny medaly amboara dia natolotra ny sekoliny ho fanomezam-boninahitra an'i Keelan anadahiny. Ny fanomezana ny amboara dia nahatonga ny sekoly hanomezam-boninahitra ny zandriny lahy rehefa namorona izy ireo “Ny Fiadiana ny Amboara Fahatsiarovana Keelan Daniel Grealish”Izay ampiasaina ankehitriny hanamarihana ny fifaninanana ao an-trano.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Road to Fame Story
Taorian'ny nandraisany ny sekoly fanabeazana katolika an'ny Our Lady of Compassion dia tany Solihull, nanohy ny fianarany sekoly ambaratonga faharoa i Jack na dia mpilalao akademia iray aza niaraka tamin'ny Sekolin'ny Romanina Katolika St Peter. Nanaiky tamin'ny ray aman-dreniny izy fa ny fampianarana ambaratonga faharoa no ho farany, fanapahan-kevitra izay inoana fa hanampy azy hifantoka amin'ny asany.
Ny vanim-potoana 2012 – 2013 dia nanova ny toeran'i Jack Grealish tamin'ny fanampiana ny ekipany tamin'ny fandresena ny NextGen Series. Jereo eto ambany ny fotoana nankalazàn'izy ireo ny amboara.
Jack Grealish- Manampy ny ekipany handresy ny 2012 – 13 NextGen Series. Ny trosa amin'ny mailaka Birmingham
Ny fifaninanana dia narahin'ny firenena 24 samihafa manerana an'i Eropa nanomboka tamin'ny 15 ny volana aogositra 2012 ka hatramin'ny 1 ny aprily 2013. Io fandresena io dia nahita ny talenta teraka anglisy sy Irlandy nahazo talenta ho an'ny zokiolona sy antso hafa hisolo tena ny ekipam-pirenen'i Irlandy.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Mitsangàna amin'ny tantara
Mbola teo amin'ny sehatra nasionaly izy taorian'ny nanalovany ny iraka avy any Irlandy ho any Angletera U21 ekipa, i Jack in 2016 dia nanampy ny ekipany tamin'ny fandresena ny Toulon Tournament malaza.
Jack Grealish mankalaza ny 2016 Toulon Tournament miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy
Grealish taorian'ny fifaninanana dia nitohy namirapiratra toy ny haingam-pandeha sy manafika ny lalao afovoany ho an'i Villa. Nidera azy noho ny fahaizany mihazakazaka ary tahaka ny hiantsoan'ny sasany azy, matoatoa mandalo ny mpifaninana aminy. Vokatry ny fihetsiketsehana tsy misy dikany, dia nahazo valisoa izy rehefa lasa mpilalao voalohany tamin'ny ekipa voalohany ary kapiteny. Amin'ny maha mpitarika azy, dia nitarika ny ekipany i Jack tamin'ny famoriam-bavan'ny ligy 10 noresahina tamin'ny klioba.
Jack Grealish Mitsangàna amin'ny tantara malaza amin'ny Aston Villa
Ary indray, notarihiny ny sisiny Villa amin'ny endriny ho any amin'ny toerana filalaovana izay fandresena ny mpifaninana no nahazo azy ireo ho fampiroboroboana tamin'ny Lalao Premier taorian'ny tsy nahitany telo taona. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Relationship Life
Ao ambadiky ny Aston Villa Legend, misy sipa modely manaitra eo amin'ny toetran'i Sasha Attwood.
Jack Grealish sy ny sipany- Sasha Attwood. Ny trosa Express.
Nihaona tamin'ny sakaizany i Jack Grealish fony tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Izy ireo dia samy zatovo niara-nianatra tao amin'ny Sekolin'ny Katolika romana St Peter tany Solihull. Niarahana hatrizay izy ireo (hatramin'ny fotoana nanoratana), mariky ny fifandraisan'izy ireo maimaim-poana amin'ny lalao.
Sasha Attwood dia modely avy any Birmingham. Nanomboka ny asany izy rehefa avy nokendren'ny mpandraharaha iray tamin'ny taonany 13 raha teo am-pivarotana niasa niaraka tamin'ny reniny tany an-tanànany izy. Attwood amin'izao fotoana izao dia nosoniavina ho an'ny Mod Models, iray ao amin'ny London sy ny masoivoho modely lamaody any Eropa.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Inona no mahatonga an'i Jack Grealish manamarika?. Mipetraha ary miala sasatra rehefa manampy anao hahazo sary feno momba ny toetrany eny an-tselatra isika.
Fanombohana, rehefa resaka kintana baolina, ny lohahevitra "mpilalao mahafinaritra”Matetika ao anatin'ny lahateny ankafizin'ny mpankafy. Mpankafy maro no mahita an'i Jack Grealish amin'ny Beckham wannabe fisaorana noho ny handsomeness izay noforonina eto amin'ny sary eto ambany.
Jack Grealish Fiainana manokana
Mamela ny volon-dohany, maro amin'ireo mpankafy no nametra-panontaniana; Fa maninona no manao grealish palitao vita amin'ny volon-koditra miaraka amin'ny fehezin'ny baolina kitra dia mihodina mandritra ny filalaovana?
Tsotra ny valiny !!. Ny endrika ivelany an'i Grealish dia vokatry ny finoana finoanoam-poana izay nahomby taminy. Manampy azy hihazona ny fahaizany mifehy tsara ny baolina izy. Tian'i Grealish manongotra ny sisin'ny baingan-dalambany izay mandeha miaraka amin'ny paosin-dàkany fohy na mihodina lavidavitra.
Nanazava ny finoanoam-poana Jack Grealish
Io karazana finoana io dia nahita ireo mpitsara mampitandrina azy amin'ny fametahana ny kiraro sy ny fanaingoana ny fitenin'ny ankizy.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakavian'i Jack Grealish dia mpankafy Aston Villa manontolo andro. Ny havany akaiky indrindra ao amin'ny 6 ary izy ireo dia teraka anglisy avokoa miaraka amin'ny fianakaviambe Irlandiana mitaiza sy havany. Ny iray amin'ny rahalahin'i Jack, Kevan Grealish dia tsy eo amin'ny sarin'ny fianakaviana eto ambany.
Sary an'ny fianakaviana Jack Grealish. Ny trosa amin'ny IG
Jack Grealish dia eo amin'ny mpilalao baolina kitra manana ny rainy amin'ny maha-mpandraharaha azy ireo. Mitana anjara toerana lehibe i Kevin amin'ny lalao taranja baolina kitra. Avy amin'ny fifampiraharahana ny teny tsara kokoa amin'ny fifanarahany amin'ny fitantanana ny fiainany eny ivelan'ny taniny no anaovany izany. Ny renin'i Jack, Karen Grealish, dia tsy tena feony, tsy mitovy amin'ny vadiny. Aleony mifantoka tsara amin'ny adidy reny ambany indrindra. Ny ray aman-dreny Jack Grealish dia manangona ny tombony azo avy amin'ny fampidirana ny zanak'izy ireo.
Rahalahy Jack Grealish: Hihaona amin'i Kevan Grealish izay fantatry ny mpankafy fa zandrin'i Jack ary hany rahalahy velona. Kevan toa ny ray aman-dreniny sy ny rahavaviny dia mpankafy Villa ihany koa izay maty.
Hihaona amin'i Jacks Brother- Kevan Grealish. Ny trosa amin'ny BMail
Kevan dia nanao loham-pianakaviana tamin'ny lasa teo amin'ny anjara asany amin'ny fiarovana ny rahalahiny lehibe amin'ny fanehoan-kevitra ratsy nataon'ny media. Araka ny 101GreatGoals, naka ny haino aman-jery hitety ny tantara nataon'i James Nursey mpanao gazety Mirror Football izy, izay nilaza fa "Grealish"vaky fo"Ary"avela ho potraka”Taorian'ny hetsika tsy nahomby an'i Tottenham.
I Jack Grealish Rahalahy Kevan dia mamono ny Mirror. Ny trosa 101GreatGoals
Rahalahin'i Jack Grealish: Jack dia manana rahavavy zazavavy mahafinaritra roa izay mitondra ny anarana Holly sy Kiera. Ny vavimatoan'ny roa mirahavavy, i Kiera dia nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'ny 14 tamin'ny andro 14 faha-8 Oktobra 2015. Ny dikan'izany dia midika hoe hivadika ho olon-dehibe amin'ny taona 2019 izy.
Jack Grealish sy Sisters- Holly (ankavia) sy Kiera (ankavanana). Ny trosa amin'ny IG
Momba ny GrandParents Jack Grealish: I Dadabe sy dadabe sy dadabe no antony mahatonga ny lova Irlandey. ny Ny reniben-dreny avy any Sneem, tanàna any amin'ny Repoblika Irlanda. Jack Grealish dia miorim-paka amin'ny Irlandey amin'ny alàlan'ny dadabeny amin'ny reniny izay avy any Dublin.
Dadabe Dadabe Jack Grealish. Ny trosa any Irlanda Herald. Ny trosa amin'ny IG
Ny ra Irlandiana koa dia mandeha avy amin'ny ilan'ny rainy satria ny raibeny amin'ny razana dia avy any Irlandy marina Gort, tanàna any atsimon'i County Galway West of Ireland. Rehefa mitsara izany dia azonao atao ny mamantatra ny volany tsy misy ifandraisany amin'ny lova Irlandey.
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Lifestyle
Toetran'i Jack ny mitahiry vola ary mametraka zavatra foana amin'ny lafiny. Hitany ho toy ny fandaniana tsy ara-drariny ny fividianana fiara eksotikanina sy Mansions ary toy ny fahazaran-dratsy na olana amin'ny fandrobana. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratany, nisafidy ny hitana ny vahaolana azo ampiharina i Jack izay tsy dia lafo. Io no mamaritra ny fomba fiainan'i Jack Grealish.
Jack Grealish Fiainana fiainana. Ny trosa amin'ny IG
Tantaran'i Jack Grealish Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Untold Facts
INHALING NITROUS OXIDE: Around Aprily 2015, nanambara sary TheSun namoaka sary mampiseho an'i Jack Grealish hisosoka ilay fantatra fa antsoina hoe nitrous oxide, fihomehezana mihomehy, na 'hippy crack'ho fialamboly.
Jack Grealish amin'ny hetsika. Ny trosa amin'ny FoxesTalk
Nilaza ny TheSun fa ny zava-nitranga dia tokony ho 6 volana lasa izay, ary tsy vokatry ny fampisehoana farany nataon'i Jack ho an'ny klioba ny hetsika. Ity hetsika ity dia nahita azy nampitandreman'i Tim Sherwood, mpiandraikitra azy taloha.
NY ASSULTER NITIAVINY JAONY: Tamin'ny andro 10 faha-2019 tamin'ny martsa, dia notafihin'i Grealish ny mpanafika malaza iray izay nanafika ny toby hanafika azy nandritra ny lalao derby Villa nankany Birmingham City.
Mompera Jack Grealish dia nanafika an'i Fan. Ny trosa EveningStandard
Taorian'ny tapany faharoa dia nanao fanambarana i Grealish tamin'ny nanoratany hanome an'i Aston Villa fandresena 1-0. Nosamborina sy nampangaina teny amin'ny fitsarana ny mpanafika efa 27, izay niangavy azy ho meloka noho ny fandikan-dalàna sy ny fanafihana. Voasazy higadra mandritra ny herinandro 14 izy.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Jack Grealish Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Jermain Defoe Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Jamie Vardy Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra